s 90 3 ukuphakama
Nangona isitayile seScruggs sisebenzisa iipateni zokuhamba kwesandla sasekunene njengeebhloko zokwakha zendlela ye-banjo, ibanjo yengoma isekwe ekufumaneni nasekudlaleni izikali phezulu nasezantsi entanyeni.
Ukunikezela amanani kumanqaku kwinqanaba le-G-enkulu
Unokufumana onke amanqaku kwisikali esikhulu se-G kwii-frets zokuqala ezintlanu zebanjo. Kodwa apha, endaweni yokubhala amanqaku kunye neesilbili zokwenza i-re-mi njengoko iVon Trapp Family Singers inokuyenza, lo mzobo unenzululwazi kwaye unikezela amanani kwinyathelo ngalinye lesikali, kunye nenombolo 1 ebonisa indawo oqala kuyo Inqaku le-G, njengoko kubonisiwe.
Qaphela kwithebhu ukuba zingaphi iinowuthsi ezilandelelanayo ezikhoyo kumtya ofanayo (umzekelo, amanqaku amanqaku amathathu kunye anesine omabini kumtya wesi-2 ngelixa amanqaku amanqanaba amahlanu, amathandathu, asixhenxe, anesibhozo onke kumtya wokuqala).
Ngendlela ye-bododic melodic, udlala iipaki ezifanayo, kodwa ufumana inqaku ngalinye ngokulandelelana kumtya owahlukileyo, usebenzisa isandla esahlukileyo sokuchola umnwe ukudlala umtya ngamnye, njengoko ubona kula macandelo alandelayo.
Qalisa ngomlinganiso omkhulu we-banjo G
Imfihlelo yokudlala isangqa se-banjo G-isikali sokuhambisa amanqaku akhathazekileyo kwithebhu ukuya kumtya osezantsi kwi-banjo yakho (la manqaku amabini, amane, amathandathu, kunye nesixhenxe kwisikali esikhulu se-G). Emva koko ungadlala imitya eyahlukeneyo ngokulandelelana xa usenyuka isikali, usebenzisa iipateni zokuhambisa ezisesandleni sasekunene ezinxulumene neeRolluggs's rolls.
Umzekelo, inqaku lesibini lesikali se-G (esibizwa ngokuba yi-A note) alifumaneki kuphela kwi-2 fret yomtya wesithathu, kodwa nakwi-7 fret yomtya we-4. Inqaku lesine lesikali se-G, inqaku C, likwintsimbi yokuqala yomtya wesi-2, kodwa ungayifumana nakwisihlandlo sesi-5 somtya wesithathu.
irobhothi ukukhwehlela kunye nokubanda
Ukudlala la manqaku akhathazekileyo kumtya osezantsi kukuvumela ukuba udlale umtya owahlukileyo kwaye unokwenza ukuba isandi sakho sidlale ngokutyibilikayo nangaphezulu.
Ukudlala isikali esikhulu se-G usebenzisa ubuchule be-banjo emnandi, yenza oku kulandelayo:
Khetha umtya wesithathu ovulekileyo ngomnwe wesandla sokunene.
Udlala inqaku le-G: inqaku lokuqala lesikali esikhulu se-G.
Fret umtya we-4 kwi-7 fret ngomnwe wasekhohlo wesandla somnwe kwaye ukhethe lomtya ngesithupha sakho sasekunene.
Uluhlu loxinzelelo kunye noxinzelelo
Eli nqaku liyinqaku, inqaku lesibini lesikali esikhulu se-G.
Khetha umtya wesibini ovulekileyo ngomnwe wesandla sokunene.
Kule nyathelo, udlala inqaku lesithathu lesikali esikhulu se-G, inqaku le-B.
Fret umtya wesithathu kwi-5 fret ngomnwe wesandla sasekhohlo kwaye ukhethe lomtya ngesithupha sokunene.
Udlala inqaku lesine le-G-major scale, eyi-C.
Khetha umtya wokuqala ovulekileyo ngomnwe ophakathi.
Udlala inqaku lika-D, inqaku lesihlanu lesikali esikhulu se-G, kweli nyathelo.
Fret umtya we-2 kwi-5 fret ngomnwe ophakathi ngasekhohlo kwaye uthabathe lomtya ngomnwe wesandla sokunene.
Apha udlala inqaku le-E, kwaye ukuba ubala, uyazi ukuba eli linqaku lesithandathu lesikali esikhulu se-G.
Fret umtya wokuqala kwi-4 fret ngomnwe wesandla sasekhohlo kwaye ukhethe lomtya ngomnwe ophakathi.
Inqaku linqaku le-F-inqaku lesixhenxe lesikali esikhulu se-G.
Dlala umtya wesihlanu uvula ngesithupha sokunene.
Udlala inqaku lika-G elingaphezulu kwe-octave ngaphezu kwenqaku le-G elifunyenwe kumtya wakho wesi-3 ovulekileyo.
Isalathisi sesandla sokunene senza umsebenzi omninzi kwi-banjo ye-melodic, ke qiniseka ukuba udlala la manqaku ngevolumu elungileyo kunye namandla.
Kwisandla sasekhohlo, unokongeza isantya kwiminwe yakho ukuba ukhulula umnwe ngamnye okhathazekileyo emva nje kokubetha inqaku ngesandla sasekunene. Oku kuvumela isandla sasekhohlo ukuba silungele indawo elandelayo yokukhathazeka.
Le thebhu ikubonisa ukuba ungadlala njani isikali esikhulu se-G usebenzisa ubuchule be-banjo emnandi. Ungalandela izikhombisi zeminwe ngasekhohlo ngokujonga oonobumba abancinci ngaphezulu kwethebhu yabasebenzi ( i imele isalathiso, m phakathi, r yeringi, kunye iphe ngomnwe wepinki).
Ukudlala isikali esikhulu se-G usebenzisa ubuchule be-banjo emnandi.
Eyona nto inobuqhophololo kubuchwephesha bomculo kule nxalenye yebhodi yebhodi yebhodi ye-banjo iyaqhelana nombono wokudlala inowuthi ephezulu evakalayo kumtya ophantsi. Ukuziqhelanisa nokulunga ukuze usebenze isikali esimnandi kwimemori yemoto yakho kunokuba luncedo ngokwenene. Emva kokuba ungene ngaphakathi kwibhodi yeminwe, awuyi kucinga ngendlela engaqhelekanga ukudlala isikali ngale ndlela!
ngaphezulu kwekhawuntari yeyeza: ukuvuza ngaphantsi
sbs 40 cream yesikhumba
Iziphumo zoxinzelelo lwezenzululwazi
indlela yokutofa inaliti yemisipha
iigreylands imilenze exineneyo nequinine
iziphumo ezibi ze-isoniazid